Nahazo filoham-pirenena vaovao i Zanzibar, fitaintainana tany an-toerana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Novambra 2010 10:13 GMT
Navoakan'ny Komisiona momba ny Fifidianana tany Zanzibar omaly efa hariva be fa i Dr Ali Mohamed Shein avy ao amin'ny antoko Chama Cha Mapinduzi (antoko revolisionera) no nandrombaka ny fandresena tamin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena tany Zanzibar ka izy izany no filoha faha fito hitondra ity firenena ity. Nandresy tamin'ny salan'isa 50,1 isan-jato izy nanoloana an'i Maalim Seif Sharif Hamad, mpitarika ny antoko mpanohitra The Civic United Front, izay nahazo salan'isa 49 isan-jato. Nifanaraka i Dr Shein sy Maalim Seif fa hanangana governemanta iraisana izay hahitana filoha avy amin'ny CCM, filoha mpanampy voalohany avy amin'ny CUF ary filoha mpanampy faharoa avy amin'ny CCM.
Nambara tao anatin'ny tsy fitonian-tsaina vokatry ny fahatarana teo amin'ny famoahan'ny Komisiona momba ny Fifidianana tany Zanzibar sy tany Tanzania ny vokatra ity valim-pifidianana ity. Nandritra izany fotoana nafampana izany dia namoaka ny vaovao farany tsy an-kiato ny mpitoraka bilaogy sy ny mpiserasera amin'ny twitter.
Bashir Nkoromo avy amin'ny Chachandu Daily namoaka ny valim-pifidianana filoham-pirenena tany Zanzibar ao amin'ny bilaoginy:
Ny mpitarika ny Komisiona momba ny fifidianana any Zanzibar (ZEC) Khatib Mwinyichande, nanambara fa i Dr Ali Mohamed Sheni no voafidy ho filoha faha fito hitondra an'i Zanzibar tamin'ny salan'isa 50,1 isan-jato raha nifanandrina tamin'i Seif Sharif Hamad izay nahazo salan'isa 49 isan-jato.
Niarahaba an'i Dr Sheni i Seif noho ny fandreseny ary nilaza fa izy (Dr Sheni) no manana fahaizana ampy, traikefa ary fitiavana hitondra ny firenena. Nilaza koa izy fa ny fandresen'i Dr Shein dia safidin'ny vahoaka any Zanzibar.
Maalim Seif Sharif Hamad (ankavanana) miarahaba ny Dr Ali Shein (sary avy amin'i Bashir Nkoromo)
Maalim Seif Hamad (ankavanana) miarahaba an'i Dr Shein.
Ao amin'ny soratra hafa mamoaka vaovao mitovy amin'io ihany, niarahaba an'i Dr. Shein koa ny mpamaky iray avy any Wavuti ary nampahatsiaro ny rehetra fa i Dr Shein no filoha voalohany avy any Pemba:
Any Zanzibar, ny namanay avy any Pemba, Dr Shein, no tonga filoham-pirenena voalohany avy any amin'ny nosy Pemba hatramin'ny taona 1964. Ary nahazo fandresena tsara izy nanoloana iro mpifanandrina taminy…
Tamin'ny alatsinainy dia sahirana ireo mpitoraka bilaogy nandefa sary mirakitra ny korontana sy ny fanehoan-kery tany Dar Es Salaam. Ilay mpitoraka bilaogy Lukwangule nandefa sary mirakitra herisetra tany Dar Es Salaam miaraka amin'izao soratra manaraka izao:
Voatery nampiasa baomba mandatsa-dranomaso sy nitifitra rano ny polisy taorian'ny herisetra nipoaka tany Tandika Ngamano ary nisambotra olona 25 mpitarika ny korontana….
Avy any Zanzibar Bashir Nkoromo nandefa sary ahitana ireo olona nitokona teo anoloan'ny hotely Bwawani izay nataon'ny ZEC ho foiben-toerany hamoahany ny vokam-pifidianana.
Ireo vahoaka teo ivelan'ny hotely Bwawani (sary nalefan'i Bashir Nkoromo)
Mandritra izany rehetra izany, ireo mpampiasa twitter toa an-sry @jamiiforums, @hakingowi, @issamwamba, ary @shurufu nilaza ny zava-misy tamin'ny fifidianana nanomboka tamin'ny alahady alina hatramin'ny alatsinainy ao amin'ny rohy: #UchaguziTZ, #uchaguzi, ary #TZelect.
Andrasana hatramin'ny faran'ity herinandro ity ny vokatra farany tamin'ny fifidianana tany Tanzania ary manohy ny fanomezana vaovao an-terinety tsy an-kiato ny media hanamaivanana ny fitaintainana vokatry ny fahataran'ny fanambarana ny vokatra sy ny fahelan'ny media nentin-drazana araka ny voasoratry @Fotobaraza ao amin'ny twitter:
Fotobaraza tsapako fa azo itokisana kokoa ny twitter noho ny TBC (Tanzania Broadcasting Corporation), miadana be ery zareo ireo.
Indreto ny adiresy twitter miresaka ny fifidianana tany Tanzania tamin'ity taona 2010 ity ary tsy tara ny vaovao:
Afaka harahanao koa ao amin'ny Mwananchi 2010 Valim-pifidianana.